> Resource > Apps > Top 5 SnapPea Alternative
Dhowrkii sano ee la soo dhaafay, software maamulka Android ay ka dhigtay in ay aad u fududahay in la maareeyo oo dhan ka kooban oo ku saabsan qalabka Android dhex PC. Snappea ayaa ku jiray liiska software ah. Si kastaba ha ahaatee, kuwa badan oo cusub ayaa ku arrinsadeen inay ka abaalmarin isticmaala qaar ka mid kale oo Snappea wax ku ool ah. Halkan waxaa ku qoran liiska yar ee walaac this.
AirDroid u adeegtaa sida kale ah ku-hawada si SnapPea, oo uu idin ​​wada siiyo awood uu ku maareeyo oo dhan warbaahinta iyo content dhex browser web ah. Ma aha oo kaliya waa lacag la'aan, laakiin waxa ay sidoo kale waa mid aad u dhakhso ah oo lagu kalsoonaan karo. Iyadoo AirDroid, content oo dhan waa fudud loo heli karo meel kasta oo fog.
Dhaqaaq audio iyo video files, waraaqaha, Bookmarks, dhacdo, sawiro iyo xiriirada ka qalab Android si aad u computer ka via madal AirDroid ah.
U ogolow in aad si ay ula socdaan telefoonka iyo hoos u fog xitaa marka uu lumo ama la xado qufulan.
Tirtiro xogta telefoonka aad Android oo kiniin fog.
Ma u baahan tahay shabakad of your computer iyo sidoo kale qalab Android aad.
Kale SnapPea Tani - Mobogenie waa software Tababaraha dhamaystiran Android badan oo ka mid ah qaababka. Waxa uu leeyahay oo dhan qaababka oo adeegaan dhammaan baahida maamulka Android aad. Halkan waxaa ku qoran liiska faa'iidada iyo khasaaraha ay.
Siiyaan xarunta khayraadka halkaas oo aad kala bixi karto iyo rakibi app lacag la'aan ah.
Xiriirada Edit ku saabsan qalabka Android dhex PC. Ku dar xiriir cusub, xaalkaa xiriirada jir iyo ka saarto kuwa loo baahnayn in hab fudud oo degdeg ah.
Music iyo videos ka iyo in ay Android devide fudud ugu guuraan.
U ogolow in aad nadiifisid fariimaha ka kooban xayeysiis iyo farriimaha.
Dib dhammaan xogta iyo dib loo soo celiyo waqti kasta.
Interface user waa yara daalid iyo u baahan yahay qaar ka mid ah horumar la yaab leh.
MoboRobo , a software cross-madal loogu casriga ah, waxa loo isticmaali karaa si ay u gudbiyaan xidhiidhka ka dhexeeya qalabka Android iyo iPhone. Ka sokow, waxay awood aad si ay u maareeyaan music, video, sawirada, barnaamijyadooda iyo in ka badan.
Xiriirada Transfer ka iPhone in Android iyo habka kale ee ku xeeran.
Waxay leeyihiin xarun hanti ee Chine load, wallpapers, ringtones iyo music.
Hesho Tababaraha SMS hidi kaas oo aad ka akhrisan kartaa iyo maarayn SMS oo dhan.
Ma aha qalab standalone oo u baahan rakibidda wadayaasha ah ee la isticmaalo.
Android Commandar , SnapPea kale ee fudud oo wax ku ool ah waxaa loo qoondeeyey in Windows oo waa tababaraha ugu gooldhalinta badnaa ee qalabka Android rujin. Waxay leedahay noocyo kala duwan oo badan oo ka kooban isku dhafan oo lagu wada synced u dhinacyo sida sahaminta file, macluumaad qalab, maamulka codsiga, app saxiixa iyo awoodaha biligleynaya. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidada iyo khasaaraha ay.
Files warbaahinta nidaameed dhexeeya qalab iyo PC iyo soo saaro karaa qasabno yar.
Si fudud u maamuli lahayd SMS iyo xiriirada, iyo dhaqaaqi karaan macluumaadka u dhexeeya xasuusta telefoonka iyo xusuusta card SD ah.
Tus macluumaad hardware ka mid ah qalabka Android iyo qoruhu ku dhex jira.
Miyuu interface si fiican loo dhisay garaafyada.
U ogolow doorashada u dhexeeya barnaamijyadooda gaarka ah, nidaamka, iyo update sida hab rakibo iyo sidoo kale inta lagu jiro nidaamka uninstall ah.
Maamul qalab Android kaliya rujin.
Kale ugu danbeysay ee SnapPea in aan leenahay boggayaga liiska yahay si balaadhan looga isticmaalaa Wondershare MobileGo for Android . Software waxa uu leeyahay maamulka content dhamaystiran qoreysa ay weheliyaan qaar ka functionalities oo kala duwan iyo sidoo kale. In eray kale, waxa uu leeyahay oo dhan qaababka maareynta content oo ay joogaan in wax software maamulka android oo uu leeyahay fudud iyo kuwo isku user interface.
Beddelaan music video iyo in aad qalab Android qaabab saaxiibtinimo -MP3 & MP4.
Mid ka mid ah click in ay xiriir gurmad, abuse wac, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda iyo ka badan si uu kombiyuutarka, iyo si fudud u soo celiyo.
Bixiya xarunta khayraadka hidi-u dajinta barnaamijyadooda, music iyo video.
Abaabulaan barnaamijyadooda, oo ay ku jiraan ku rakibidda, uninstalling, dhoofinta iyo in la wadaago.
Import files badan vCard, oo u hagaagsan Outlook la telefoonka aad Android fudayd.
Hel oo si toos ah u soo diro fariimo qoraal ah oo ka kombiyuutarka, iyo joog wac telefoonka iyo qoraalka halkii.
Xiriir Transfer, barnaamijyadooda iyo files warbaahinta ka mid qalab Android in kale.
Marka loo eego SnapPer, waxa aanu bixin gurmad ah automatic. Waxaad u baahan tahay gurmad gacanta.
Sida dadka isticmaala Mac, fadlan tag version Mac - Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac)